momba anay - Tanzania Crusher
Isika dia mitazona ny hevitry ny serivisy momba ny "zavaboary manan-danja kokoa amin'ny mpanjifa", ny fitsaboana amin'ny mpanjifa amin'ny fontsika rehetra, ary eo am-piandrasana izany. Ny mpanjifa dia mizara amin'ny firenena 120 any Azia, Eoropa, Moyen-Orient, Oseania ary Amerika. Mampihatra ny fahalalantsika matihanina isika ary ny fahafahana manompo manerana izao tontolo izao mba hiantohana ny vokatra tsara indrindra ho an'ny orinasan'ny mpanjifa.
Ny fisafidianana ny labozia havanana dia manomboka amin'ny fisafidianana ny mpanamboatra mpamokatra havanana. Shanghai Xuanshi Machinery Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpamokatra mpamokatra angovo lehibe indrindra ao Shina. Noforonina tamin'ny 2002, manana traikefa maro izahay amin'ny fanampiana mpanjifa misafidy ny fitaovana hiposahan'ny fitaovana ho an'ny fampiharana rehetra. Ny fifantohana amin'ny famolavolana vahaolana tokana sy mahomby ho an'ny fametrahana fihenam-bidy lehibe, dia nanome baoritra vato ambonimbony kokoa, milina sandin-tsolika ary manodina molotra amin'ny mpanjifa marobe eran-tany. Noho ny kalitao sy ny tolotra fenoinay dia nomena ny Xuanshi ho an'ny ISO9001: Certificates 2008, Certificates global certificates sy certificates CE. Ny orinasanay dia miorina ao Shanghai, izay ahazoanay miditra amina ranomasina, tany, ary fitaterana an'habakabaka. Izany dia manamora ny fitaterana bronteur vato ary mampihena ny fandefasana entana ho an'ny mpanjifantsika.
Mba hamenoana ny filàna maro samihafa amin'ny mpanjifantsika, dia mamokatra karazana vato samihafa, manodina milina, milina sand, fasika sy vatosoa, ary fitaovana fanodinana mineraly. Ny sasany amin'ireo vokatra malaza indrindra dia ny famatsian-tsolika, ny fiompiana, ny crushers, ny sandan'ny fanasan-drano, ny famokarana milina, ny solontenan'ny magnet, ny milina fitotoana, ary ny hafa. Ireo vokatra rehetra ireo dia natao mba hanomezana asa avo lenta, lava-pahavitrihana ary ny fandaniana ambany. Amin'izao fotoana izao dia ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny fanamboarana fanorenana any amin'ny indostria isan-karazany, toy ny fitrandrahana, simenitra, famokarana angovo, fiasa simika, metallurgy, fanorenana seranana, ary maro hafa. Ankoatra izany, manome vahaolana amin'ny famolavolana tetikasa izahay, toy ny fametrahana tsipika mason-koditra, rindranasa famokarana, famokarana famokarana ary tsipika famokarana sand.